Wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay weerarkii ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
on September 22 2013 Wararka ugu dambeeyay ee laga helaayo qasaaraha ka dhashay weerarkii shalay lagu qaaday suuqa ganacsiga Westgate ee magaalada Nairobi ayaa waxay sheegayaan inay sii caga cageeynayso dhimashada 59 qof halka dhaawacane uu gaarayo ilaa 162 kale, iyadoona xaruntaasi ay weli ku sugan yihiin kooxihii weerarka kusoo qaaday.
Wasiirka arimaha gudaha ee dalka Kenya Joseph Ole Lenku oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weli ay socdaan howlgalo aad u culus oo ku aadan sidii loo soo badbaadin lahaa dadka lagu haysto xarunta ganacsiga Westgate oo ay kooxihii weerarka ku qaaday halkaasi ku haystaan. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in weerarkaasi ay ku geeriyootay ilaa 59 qof halka 162 kalene ay ku dhaawacantay, waxaana uu wasiirka tilmaamay in dadka dhaawacmay ay ku jiraan laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ee dalkaasi.
Wasiirka ayaa dhinaca kale tilmaamay inay weli socdaan dadaalada ku aadan sidii loo soo badbaadin lahaa dadka weli ku jira gacanta raga hubeeysan.
�Waxaa inta la xaqiijiyay dhimashadu ay mareeysaa 59 qof oo rayid ah, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 162 kale oo ay ku jiraan laba ka tirsan ciidamada dalka Kenya, waxaana weli socda dadaalo la doonayo in lagu soo badbaadiyo dadka kale oo gacanta ugu jira kooxaha hubeeysan ee argagaxisadda ah� Sidaas waxaa yiri Joseph Ole Lenku.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Kenya ay haatan ku sugan yihiin dabaqa koowaad ee dhismaha suuqa Westgate, halka kooxihii weerarka kusoo qaaday halkaasi uu sheegay inay ku sugan yihiin dabaqyada sedaxaad iyo afaraad, iyadoona xiisada halkaasi ka taagan ay weli kacsan tahay.